Taxaanaha taariikheed | Samfunnskunnskap.no
150 sanno ka hor beeraha, alwaaxa iyo kalluunku waxay ahaayeen ilaha dhaqaale ee Norwey ugu muhiimsan.
Wax badan ayaa ilaa waqtigaas isbedelay. Dhammaadkii 1800 waxa la dhisay warshado, dad badan ayaa magaalooyinka u guuray si ay wershadaha uga shaqeeyaan. Qeybtii hore ee 1900 kii ayaa waxa la abuuray shaqooyin badan oo cusub oo wershadaha ah. Sidoo kale noorwiiji badan ayaa u safray Maraykanka oo halkaa degay.
1950 kii boqolkiiba 20 ayaa dadka ka shaqeynayey beeraha, maanta tiradaasi waxay hoos ugu dhacday wax ka hooseeya boqolkiiba saddex. Haddana cunto intii hore ka badan ayaa maanta Norwey laga soo saaraa. Tan waxa sababay in maanta mashiino la haysto kuwaas oo fududeeya oo wanaajiya shaqada beeraha.
30-kii sanno ee u dambeeyey waxa mar labaad isbedelo waaweyni ku dhaceen suuqa shaqada ee Norwey. Waxa dib u dhac weyni ku yimi tirada dadka weshadaha ka shaqeeya.
Kadib markii saliida laga heley badda Waqooyi dhammaadkii 1960 kii, waxay wax-soo-saarka saliida iyo gaastu qayb weyn ka noqdeen wershedaha noorwiijiga. Saliida iyo gaastu macne weyn ayey ugu fadhiyaan warshadaha noorwiijiga. Weli wax wayn bay u sii ahaan Norwey, walow la sii higsan doono isbedelka cagaaran sababo la xidhiidha carqalada cimilada.
Maanta shaqooyinka ugu badani waa shaqooyinka adeega, halkaa waxa ka shaqeeya qiyaastii 1,8 milyan oo qof. Taas macnaheedu waxa weeye in qofka Norwey shaqo ka rabaa, uu fursad fiican u heysto inuu ka shaqeeyo sida dukaan, hey’adaha caafimaadka, dugsiyada iyo xannaanada carruurta ama gaadiidka dadka. Dad badana waxay shaqo ka heli karaan shaqooyinka la xidhiidha horumarka macluumaadka tiknoolajiyada..